Pyidaungsu Institute (PI) - ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)
PI အကြောင်းဆက်သွယ်ရန် English Version
To subscribe our Peace Info (News PI), please enter your email here!	ပင်မှစာမျက်နှာ	နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ	နောက်ဆုံးအခြေအနေ	အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး	ခြုံငုံ ရှင်းပြချက်များ	အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုသည်မှာ	Single Text	စစ်သည်ကျင့်ဝတ်	အပစ်ရပ်စောင့်ကြည့်ရေး	မူရင်း မှတ်တမ်း	နှစ်ဖက် သဘောတူညီချက် စာချုပ်များ	ကချင်ြပည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO)	ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)	ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS)	ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)	မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)	ဝပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA)	ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP)	ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF)	အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်တပ်မတော် (NDAA)	ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး၊ ကရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (KPC)	ဒီမိုကရေစီ ကရင်အကျိုးပြု တပ်မတော် (DKBA)	ပအိုးအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (PNLO)	နာကအမျိုးသား ဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ - ခပ်ပလန် (NSCN-K)	တအောင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA)	ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP)	မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF)	တစ်နိုငံလုံး အတိုင်းအတာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် မူကြမ်း	အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ	Single Text	စစ်သည်ကျင့်ဝတ်	အပစ်ရပ်စောင့်ကြည့်ရေး	Working Documents	နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ် ကဏ္ဍအလိုက်ပြဇယား	ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု စောင့်ကြည့်ကွပ်ကဲမှု ယန္တယားများ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက်	PI မှ ရရှိနိုင်သော စာတမ်းသစ်များ	နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူဘောင်	ခြုံငုံ ရှင်းပြချက်များ	နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူဘောင် ဆိုသည်မှာ	နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မိတ်ဆက်	နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မိတ်ဆက် (၂)	နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူဘောင် အဖွဲ့အစည်းများ	ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲမူဘောင် ရေးဆွဲရေးကော်မတီ (PPIC)	ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် (FDA)	ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီ ဖယ်ဒရေးရှင်း (NBF)	အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD)	တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT)	စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ မဟာမိတ် (UNA)	ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ (UPWC)	တိုင်းရင်းသားများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်အဖွဲ့ (WGEC)	နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်ငန်းစဉ် ကိရိယာများ	Stakeholders	လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ	တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT)	ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO)	ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)	ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS)	ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)	မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)	ဝပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး ပါတီ (UWSP)	ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP)	ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF)	အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်တပ်မတော် (NDAA)	ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး၊ ကရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (KPC)	ဒီမိုကရေစီ ကရင်အကျိုးပြု တပ်မတော် (DKBA)	ပအိုးအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (PNLO)	နာကအမျိုးသား ဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ - ခပ်ပလန် (NSCN-K)	တအောင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA)	ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP)	မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF)	အစိုးရ	နိုင်ငံရေးပါတီ	ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် (FDA) ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီ ဖယ်ဒရေးရှင်း (NBF)	အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲမူဘောင် ရေးဆွဲရေးကော်မတီ (PPIC)	စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ မဟာမိတ် (UNA)	CSOs	Peace Resource	Resource Guide	Myanmar Resource Guide (English)	PI Peace Library	အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်များ	ဖက်ဒရယ် (မြန်မာ)	ဖက်ဒရယ် (English)	ဖွဲ့စည်းပုံ (မြန်မာ)	ဖွဲ့စည်းပုံ (English)	မူးယစ်ဆေးဝါး (မြန်မာ)	မူးယစ်ဆေးဝါး (English)	လယ်ယာမြေပြောင်းလဲရေး (မြန်မာ)	လယ်ယာမြေပြောင်းလဲရေး (English)	လုံခြုံရေး (မြန်မာ)	လုံခြုံရေး (English)	စီးပွားရေး (မြန်မာ)	စီးပွားရေး (English)	နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေး	Decentralization	Federalism	Security Sector Reform	Economic Reform	Land Reform	မာလ်တီမီဒီယာ	ဓာတ်ပုံ	ဗီဒီယို	သတင်း	ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်	အစိုးရ	နိုင်ငံရေးပါတီ	လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း	အခြား	လစဉ်သတင်းလွှာ	နေ့စဉ်စုစည်းသတင်း	ပင်မှစာမျက်နှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ နောက်ဆုံးအခြေအနေ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ခြုံငုံ ရှင်းပြချက်များ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုသည်မှာ Single Text စစ်သည်ကျင့်ဝတ် အပစ်ရပ်စောင့်ကြည့်ရေး မူရင်း မှတ်တမ်း နှစ်ဖက် သဘောတူညီချက် စာချုပ်များ ကချင်ြပည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS) ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) ဝပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP) ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်တပ်မတော် (NDAA) ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး၊ ကရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (KPC) ဒီမိုကရေစီ ကရင်အကျိုးပြု တပ်မတော် (DKBA) ပအိုးအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (PNLO) နာကအမျိုးသား ဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ - ခပ်ပလန် (NSCN-K) တအောင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA) ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) တစ်နိုငံလုံး အတိုင်းအတာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် မူကြမ်း အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ Single Text စစ်သည်ကျင့်ဝတ် အပစ်ရပ်စောင့်ကြည့်ရေး Working Documents နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ် ကဏ္ဍအလိုက်ပြဇယား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု စောင့်ကြည့်ကွပ်ကဲမှု ယန္တယားများ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက် PI မှ ရရှိနိုင်သော စာတမ်းသစ်များ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူဘောင် ခြုံငုံ ရှင်းပြချက်များ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူဘောင် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မိတ်ဆက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မိတ်ဆက် (၂) နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူဘောင် အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲမူဘောင် ရေးဆွဲရေးကော်မတီ (PPIC) ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် (FDA) ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီ ဖယ်ဒရေးရှင်း (NBF) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT) စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ မဟာမိတ် (UNA) ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ (UPWC) တိုင်းရင်းသားများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်အဖွဲ့ (WGEC) နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်ငန်းစဉ် ကိရိယာများ Stakeholders လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT) ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS) ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) ဝပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး ပါတီ (UWSP) ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP) ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်တပ်မတော် (NDAA) ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး၊ ကရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (KPC) ဒီမိုကရေစီ ကရင်အကျိုးပြု တပ်မတော် (DKBA) ပအိုးအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (PNLO) နာကအမျိုးသား ဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ - ခပ်ပလန် (NSCN-K) တအောင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA) ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) အစိုးရ နိုင်ငံရေးပါတီ ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် (FDA) ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီ ဖယ်ဒရေးရှင်း (NBF) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲမူဘောင် ရေးဆွဲရေးကော်မတီ (PPIC) စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ မဟာမိတ် (UNA) CSOs Peace Resource Resource Guide Myanmar Resource Guide (English) PI Peace Library အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်များ ဖက်ဒရယ် (မြန်မာ) ဖက်ဒရယ် (English) ဖွဲ့စည်းပုံ (မြန်မာ) ဖွဲ့စည်းပုံ (English) မူးယစ်ဆေးဝါး (မြန်မာ) မူးယစ်ဆေးဝါး (English) လယ်ယာမြေပြောင်းလဲရေး (မြန်မာ) လယ်ယာမြေပြောင်းလဲရေး (English) လုံခြုံရေး (မြန်မာ) လုံခြုံရေး (English) စီးပွားရေး (မြန်မာ) စီးပွားရေး (English) နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေး Decentralization Federalism Security Sector Reform Economic Reform Land Reform မာလ်တီမီဒီယာ ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို သတင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် အစိုးရ နိုင်ငံရေးပါတီ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း အခြား လစဉ်သတင်းလွှာ နေ့စဉ်စုစည်းသတင်း Breaking News
PEACE Info (April 21, 2017)	- 21 Apr 2017	PEACE Info (April 20, 2017)	- 21 Apr 2017	PEACE Info (April 19, 2017)	- 21 Apr 2017	PEACE Info (April 18, 2017)	- 19 Apr 2017	PEACE Info (April 12, 2017)	- 12 Apr 2017	Homeအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမူရင်း မှတ်တမ်းနှစ်ဖက် သဘောတူညီချက် စာချုပ်များကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့နှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတို့၏ ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အစည်းအဝေးသဘောတူညီချက်	Tagged under
Read more...	၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီ လ ၆ ရက်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရန်အတွက် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ တို့၏ ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	Tagged under
Read more...	၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်၊ အစိုးရနှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရန်အတွက် ပဏာမသဘောတူညီချက်	Tagged under
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီ လ ၁၀ ရက်နေ့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးနှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ မြိတ်-ထားဝယ်ခရိုင်အဖွဲ့တို့ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှတ်တမ်း	Start Prev 12Next End Page 1 of 2	ပင်မှစာမျက်နှာPI အကြောင်းဆက်သွယ်ရန်
Copyright © 2017 Pyidaungsu Institute (PI). All Rights Reserved.